Guddi Khubarro ah oo baareyso Khasaaraha Soomaalida ka soo gaaray Diyaaradaha aan Duulliyaha lahayn. – idalenews.com
Guddi Khubarro ah oo baareyso Khasaaraha Soomaalida ka soo gaaray Diyaaradaha aan Duulliyaha lahayn.
Garyaqaan u dhashay dalka Britain aya loo xil saray inuu horkaco Guddi ay QM u magacowday inay baaritaan madax-bannaan ku sameeyaan khsaaraha ay Diyaaradaha aan Duulliyaha Lahayn ‘Unmanned aerial vehiciles (UAVs ama Drones) ka geystaan gudaha dalalka Somalia, Yeman, Pakistan, Afganistan iyo dhulalka la-haysto ee Flastiin.
Khabiirkaasi oo lagu magacaabo Bren Emmerson iyo Guddigiisa waxaa lagu wadaa inay baaritaan ku soo sameeyaan Isticmaalka dhinaca Milliteri ee Diyaaradahaasi iyo khasaaraha dadka rayidka ka soo gara duqeymana ay Drones-ka geystaan.
‘Waxaan si buuxda u soo baari doonaa Hawlgalladda Diyaaradaha aan Duulliyaha lahayn ee Ciiddamdda dalalka Maraykanka, Britain iyo Israel ka geystaan dalalka Somalia,.Yeman, Pakistan, Afganistan, Mali iyo dhulalka la haysto ee Falastiin’ ayuu yiri Bren Emmerson oo wareysi siiyey Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalladd London.
Guddigan oo fadhigoodu noqonayo Geneva, ayaa waxaa xubno ka ah 6-Khubarro oo ku takhasusau dhinacyada Shaciga, Milliteriga iyo Dhakhaatiir aqoon u leh dhaawacyadda ay qaraxyadda geystaan.
Guddigan, waxaa ugu caansan Sir Geoffery Nice oo ahaa Xeer-ilaaliyihii hore ee Maxkamadda Caalamiga ee qadaysay Dembiyaddii ka dhacay dalkii la oran jirey Yugoslavia.
Guddigan waxay u xooraansan doonaan khasaaraha ka dhashay ku dhawaad 20 ilaa 30 weerar oo Diyaaradaha Drones-ka loo adeegsaday , iyadoo la eegayo khasaraha dadka rayidka soo gaaray iyo magacyadda Maleeshiyooyinka lala eegtay duqeymahasi .
Guddigan waxaa lagu wadaa inay baaritaankooda kadib, Warbixin u gudbiyaan Golaha Guud ee QM oo kulan ka yeelan doona khasaaraha ay Diyaradha Drones-ka u geystaan dadka Rayidka.
Magcaabista Guddiga madaxa bannaan ee QM u xil-saartay baaaritaanka khasaaraha Diyaaradaha Drones-ka u geystaan dadka Rayidka, ayaa waxay timid, kadib, markii ay dhowr dal oo ay ka mid tahay Dowladda Pakistan iyo Labo Dowladood oo ka tirsan Xubnaha Golaha Ammaanka ee QM ka codsadeen in baaritaan lagu sameeyo Tacadiyadda ay Diyaaradaha Drones-ka u geystaan dadka rayidka ah ee ku nool dalalka Somalia, Yeman, Pakistan, Afganistan, Mali iyo Falastiin.
Ciidamada Amisom oo Beledweyne tababar ugu furay maleeshiyaad ka mid noqonaya ciidamada dowlada
Shirkii Baarlamaanada Wadamada carabta oo Soo Idlaaday iyo Qodobo Soomaaliya Quseeya oo kasoo baxay